Famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fanisàna faobe | Primature
Famoahana tamin’ny fomba ofisialy ny vokatry ny fanisàna faobe
Mahazoarivo, ny 15 febroary 2021 – Notanterahin’ny “Institut National de la Statistique” (INSTAT) teny amin’ny foiben’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny teny Anosy androany hariva ny famoahana tamin’ny fomba ofisialy ny antontan’isa mirakitra ny vokatra azo tamin’ny fanisàna faobe sy ny fanadihadiana ny mponina isan-tokan-trano notanterahina teto amin’ny firenena. Tonga nanome voninahitra izany fotoana izany ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, ary ireo solon-tena avy amin’ny mpiara-miombon’antoka, sy ny mpisehatra hafa eo amin’ny lafiny toekarena.
Notsiahivin’ny Praiminisitra fa tsy vitantsika ny nanao ny fanisana ny mponina teto amin’ny firenentsika tao anatin’ny 28 taona, satria tamin’ny taona 1993 no nitranga farany izany, raha tokony ho natao isaky ny 10 taona, araka ny fe-potoana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Fantatra fa zava-dehibe eo amin’ny faminavinàna ny politikam-pampandrosoana hampiarina eo amin’ny firenena iray ny fananana ny antontan’isan’ny momba ny vahoaka ao aminy, satria iny no fitaovana fototra iomanana amin’ny ho fivoaran’ny mponina, ka harahina fanisàna na fanadihadiana isan-taona izany, araka ny fanazavany ihany.
Nambarany koa fa ho an’ny firenentsika manokana dia izao fanisàna izao no hamantarana ny isan’ny mponina eto Madagasikara. Ny zavatra azo notsoahina avy amin’izany dia ny fahitàna fa nitombo ny isan’ny Malagasy, satria efa mihoatra ny 25 tapitrisa amin’izao fotoana izao, ka ny 51% dia vehivavy. Tsara ho fantatra, hoy ny Praiminisitra, fa tao anatin’ny vanim-potoana tsy nisian’ny fanisàna faobe dia sarotra tokoa ny nandray fanapahan-kevitra amin’ny hitondràna ny fampivoarana, satria nilaina ny nahafantarana ny faritra sy ny distrika maro mponina indrindra, maro vehivavy, maro lehilahy, ny isan’ny feno 18 taona, mba hanaraha-maso na hanombanana ny lafiny fahasalamàna sy ny fanabeazana, na koa ny fari-piainana sy ny toeram-ponenan’ireo mponina ireo amin’ny ankapobeny, ka hahafahana mijery ny fotodrafitrasa mifandraika amin’ny fizaràn’ny mponina amina faritra iray, toy ny trano fitsaboana sy ny sekoly izany. Notsipihiny fa azo ampiasaina amin’ny zavatra rehetra eto amin’ny firenena izany antontan’isa izany
Nisaotra manokana ny vahoaka Malagasy ny Praiminisitra: “matoa azontsika izao vokatra izao dia satria nanokatra varavarana ny vahoaka Malagasy ary nandray anjara tao anatin’izao fanisàna faobe izao”. Ahafahana mahafantatra ny tokony hatao sy handrindràna ny drafitra rehetra eo anivon’ny firenena, ho amin’ny folo taona manaraka ny antontan’isa azo, hoy ihany ny Praiminisitra, ary hanamora ny fanataterahana ny vina hampandrosoana ny sehatra rehetra. Nanolotra fisaorana ho an’ireo mpiara-miombon’antoka namatsy ny fanisàna faobe ihany koa ny tenany.
Nomarihin’ny Lehiben’ny goverenemanta fa 81 isanjaton’ny Malagasy dia monina any ambanivohitra avokoa. Midika izany, hoy izy, fa raha hiady amin’ny fahantràna isika dia tsy maintsy miompana kokoa amin’ny eny ambanivohitra ny ezaka hatao, mba hanarahana ny zotram-pampandrosoana.
← Fivoriana mikasika ny drafi-pirenena marolafy iatrehana ny valan’aretina Corona virus
Fanomezana avy amin’ny governemanta Japoney →
Réunion sur la sécurité maritime